RAKONDRINA Fulgence kandida MMM ho ben’ny tanana ao Ranomafana |
RAKONDRINA Fulgence kandida MMM ho ben’ny tanana ao Ranomafana
Iray amin’ireo kandida ho ben’ny tanana vonona hiatrika ny safidin’ny mpifidy ao amin’ny kaominina Ranomanafa no mitafatafa amintsika. Ndao ary.
Iza moa ianao ary inona ny dingam-piofanana nataonao ?
RAKONDRINA Fulgence no tena anarako, fantatry ny maro amin’ny hoe : « Rafily », 49 taona aho, manam-bady ary manan-janaka, mpiasan’ny JIRAMA. Nianatra tamin’ny sekolim-panjakana ary efa maro ny fiofanana vita sy ny andraikitra nosahaniko toy ny maha filohan’ny CDC (Comité de Développement Communal) hatramin’ny taona 2007 izay niova ho SLC (Structure Locale de Concertation) moa io taty aoriana. Izany hoe efa niara-niasa tamina ben’ny tanàna telo nifandimby aho izany mandrak’izao. Ankoatr’izay ny fahaiza-mitarika sy fanentanana momba ny fandresen-dahatra mikasika «ny fiovaovan’ny toetr’andro », ny fampidiran-ketra sy ny fananan-tany, ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin’ny VOI (Vondron’Olona Ifotony) hanitarana sy hiarovana ny akanjon’ny faritra arovana na ireo faritra manodidina ny Parc National izany, niarahana niasa tamin’ny Centre Valbio sy ny UNICEF. Eo koa ny lafiny ara-pahasalamana misolo tena ny vahoaka amin’ny fitantanana Pharmacie Gestionnaire Communautaire du CSB 2 Ranomafana ary ara-pinoana dia Filohan’ny FLM Ranomafana hatramin’ny taona 2000 ka hatramin’izao.
Inona no antony nandrisika anao hirotsaka ben’ny tanàna ?
Ny antony nahatonga ahy hirotsaka ben’ny tanàna dia efa rà mikoriana amiko ny fampandrosoana kaominina sy ny mahafantatra ny zavatra ilain’ny vahoaka nandritry ny 12 taona tao amin’ny kaominina izay ka tiako hotohizana bebe kokoa izany. Saika maro amin’ireo asa lehibe naorina teto amin’ny kaominina mantsy dia nasaina notantaniko teto niaraka tamin’ny mpitondra nifandimby teo. Azo lazaina hoe anisany nampijoro ny andry amin’ny fampandrosoana teto aho izany. Folo ny mpanolotsaina miaraka amiko ka ahitana ny sokajin’olona rehetra. Ny antoko MMM no nanolotra anay izay miara-miasa amin’ny fitondram-panjakana.
Ahoana ny vinan’asanao ?
Ny fanavaozana ny drafi-pampandrosoana kaominaly hifanaraka amin’ny an’ny faritra sy ny an’ny fanjakana foibe eto. Faniriako ny hametraka rafi-piarahamonina vaovao ka hisy birao manokana (ivon-toerana) misahana ny tanora, vehivavy, raiamandreny satria ny andraikitra nisy ahy ireo dia mila firaisankina; ka hiainga amin’io ivon-toerana io ny fatsakan-kevitra iaingan’ny fampandrosoana ato amin’ny kaominina. Hahafahana mampandroso bebe kokoa dia laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana ambanivohitra sy ny fananan-tany(BIF). Ny antony dia isany manana olana be aty io ary raha jerena ity kaominina ity dia « borne 506 » any amin’ny faritany. Ka hiezaka aho na dia efa nanao ny mpitondra teo aloha. Fandrosoana voalohany ny filamin’ny fiainam-bahoaka ary raha mitebiteby ny olona eo amin’ny tany onenany dia maivana ny fampandrosoana hafa. Tsy ireo ihany anefa fa misy isan-tsokajiny,ohatra ny fananana ny rano mafana. Ny ilain’ny vahoaka mantsy dia ny hiditra ao anatin’ny vilaniny ka arovana fatratra ny fandripahana ala. Eo koa ny fandrakofana ala na hazo fihinam-boa mampidi-bola ireo toerana solasola. Tombontsoa manokana hitazomana ny rano ny ala, toy ny sinibe izy io ary hitantsika ny fananana io famokarana jiro io mba hampihenana ny « délestage ».
Inona ny mampiavaka anao ary inona no soatoavina iainanao ?
Olon’ny fiarahamonina, serasera, an’ny fiangonana indrindra ary matahotra an’Andriamanitra, manaja ny soatoavina malagasy. Ary olon’ny fampandrosoana. Ny mamehy azy dia ity : « Ary aoka ho ambonin’izany rehetra izany ny Fitiavana .» Kol.3,4a.
Nangonin’i Cousin Dox.
Next Rabeharinirina Manjato Lalasoa, kandida ao Andoharanofotsy
Olona tena tia fihavanana sy fiaraha-monina i Rina Randriamasinoro
Rabeharinirina Manjato Lalasoa, kandida ao Andoharanofotsy